डा. केसीलाई अनशन नबस्न त्रिवि चिकित्सककै सुझाब « मेचीखबर
डा. केसीलाई अनशन नबस्न त्रिवि चिकित्सककै सुझाब
२२ असार २०७३, बुधबार ०६:५६
झापा । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का पदाधिकारी र विभागीय प्रमुखले प्रा.डा. गोविन्द केसीलाई अनशन नबस्न आग्रह गरेका छन् । अनशन नै बस्ने भए आइओएम परिसरबाहिर बसिदिन उनीहरूको आग्रह छ । केसीले आइतबारदेखि अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन् ।
पटकपटकको अनशनले शिक्षण अस्पतालको स्वास्थ्य सेवामा अवरोध भएको र आइओएमको पठनपाठनमा पनि नकारात्मक असर परेकाले अनशनमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा. दीपक महराले बताए । ‘हामीले सकेसम्म अनशन नै नगर्न आग्रह गरेका छौ“ । गर्ने नै हो भने पनि यसपटक पठनपाठनमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी आइओएम परिसरबाहिर बस्न अनुरोध गरेका छौं’, उनले भने ।
डिन कार्यालयमा डा. केसीसहित सोमबार र मंगलबार बसेको पदाधिकारी र विभागीय प्रमुखहरूको बैठकले अनसन नबस्न आग्रह गरेको हो । बैठकले अनशन नबस्न र बस्ने भए परिसरबाहिर जान लिखित आग्रह नै गरेको छ । बैठकको उपस्थिति पुस्तिकामा डा. केसीले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।